ရိုးရာအလင်းရင်းမြစ်ကျော် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏အားသာချက်များဘာတွေလဲ - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ကိုမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များတွင်အသုံးပြုသည်, အလင်းသေတ္တာများ, LED အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်ကောင်တာ. ထုံးတမ်းစဉ်လာအရမီးအလင်းများသည်မီးချောင်းများအသုံးပြုသည်, incandescent မီးခွက်, tungsten halogen lamps, သတ္တု halide မီးခွက်, စသည်တို့. ဒီအလင်းအရင်းအမြစ်များအများအပြားချို့ယွင်းချက်ရှိသည်, သောကာလဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရှိန်အဟုန်နှင့်အတူတက်မတက်နိုင်ပါ, နှင့်တဖြည်းဖြည်း LED အလင်းသတင်းရင်းမြစ်များကဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြသည်.
LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်, စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း, သက်တမ်းကြာရှည်ခံပြီးလှပသောအလင်းရောင်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, စွမ်းအင်ချွေတာရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌: LED light box ၏စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှုန်းသည်မြင့်မားသည် 80%, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်ရိုးရာ LED အလင်းသေတ္တာ၏ဆယ်ပုံတစ်ပုံခန့်သာရှိသည်. ထုံးတမ်းစဉ်လာ LED မီးသေတ္တာသည်အလွန်ပါးလွှာသော LED light box ထက်တစ်နာရီလျှင် ၅၀၀W ပိုမိုစွမ်းအင်သုံးစွဲသည်. ယေဘူယျအားဖြင့်, 60% အဆိုပါချောင်းဆီမီးခွက်၏လျှပ်စစ်မီးအလင်းစွမ်းအင်သို့ကူးပြောင်းသည်, နှင့် 30-40% လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏အပူစွမ်းအင်သို့ကူးပြောင်းသည်. သူတို့ထဲတွင်, 200W လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည်အပူစွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးသည်. စျေးဝယ်စင်တာများမှာ, 200W လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမှရရှိသောအပူစွမ်းအင်ကိုထိန်းညှိရန်လေအေးပေးစက်သည် 200-300w power ကိုသုံးစွဲသည်. ဒီလိုမျိုး, anရိယာနှင့်အတူ Ultra-ပါးလွှာသော LED အလင်းသေတ္တာ3စတုရန်းမီတာသည်သမားရိုးကျ LED light box နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်နာရီ ၈၀၀W နှုန်းသက်သာသည်.
ဒုတိယအချက်, ၎င်းသည်ရိုးရာအလင်းအရင်းအမြစ်ထက်အာကာသကိုချွေတာသည်. သမားရိုးကျ LED light box ၏အထူသည်များသောအားဖြင့် ၂၀cm ဖြစ်သည်, ကော်လံတစ်ခု၏အကျယ်မှာ ၁၀၀ စင်တီမီတာဖြစ်သည်. ထိုအခါကော်လံလေးဖက်နှင့်အတူ LED အလင်း box ကိုသိမ်းပိုက် 0.8 စျေး ၀ ယ်စင်တာနေရာစတုရန်းမီတာ. ပါးလွှာသော LED light box ၏အထူမှာ ၂.၆ စင်တီမီတာသာရှိသည်. ကော်လံတစ်ခုသည်လေးဖက်ပါ ၀ င်သည်, နှင့်စျေးဝယ်စင်တာအာကာသသည် 0.01 စတုရန်းမီတာ, အရာကိုကယ်တင်နိုင်ပါ 0.7 အာကာသစတုရန်းမီတာနှင့် 10 ၏ကော်လံ7စတုရန်းမီတာ. ဒီလိုမျိုး, အခန်းထဲကငွေအမြောက်အများကိုကျွန်တော်တို့ချွေတာနိုင်တယ်.
ကောင်းမွန်တဲ့ display effect ရှိပါတယ်, ယူနီဖောင်းအလင်း, နံရိုးအရိပ်မရှိ, မြင့်မားသောအရောင်လျှော့ချရေး. ဒီပစ္စည်းကအဆင်ပြေပြီးမြန်တယ်, ရိုးရာ LED မီးသေတ္တာသည်ရွေ့လျားရန်မလွယ်ကူပါ၊ နောက်တဖန် အသုံးပြု၍ မရပါ. အလွန်ပါးလွှာသော LED မီးသေတ္တာကိုအလွယ်တကူရွှေ့။ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်. ဒီ box ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် 10 နှစ်ပေါင်း. စက်၏စွမ်းအားအားဖြင့်တိုးတက်သည် 50% နှင့်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကိုအလွန်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်. အပြင်မှာမြင်ရတဲ့ LED light box ကအမြဲတမ်းထွန်းလင်းနေပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ static အမြင်အာရုံအာကာသ၌အကြှနျုပျတို့၏အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုတိုးတက်အောင်အတွက်အလွန်ထိရောက်သောသော. ယခုဤသည်မှာလျင်မြန်စွာပြေးလွှားနေသည့်ဘ ၀ တွင်ရောက်ရှိနေပြီးမြို့၏ဖိအားပေးမှုကိုခံနေရသည်။.
LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်သည် Ultra bright LED ကိုအသုံးပြုထားသည်, LED ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအလွန်သိသာဖြစ်ကြသည်, နှင့်၎င်း၏ LED ရောင်စဉ်နီးပါးမြင်နိုင်အလင်းတီးဝိုင်းများတွင်စုစည်းထားသည်, ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တောက်ပတဲ့စွမ်းအင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 80 ~ 90%. ကမ္ဘာ့အယူအဆ၌တည်၏, စွမ်းအင်ချွေတာသောမီးချောင်းများသည်စွမ်းအင်ကိုသက်သာစေသည်4/ 5, အရာယခုကြီးမားတဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်မမျှော်လင့်ဘဲ, LED သည်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းထက်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းဖြစ်သည်, အရာအလင်း၏သမိုင်း၌အကြီးမြတ်ဆုံးဆန်းသစ်တီထွင်မှုအဖြစ်လူသိများသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်တွင်အားသာချက်များစွာရှိသည်. ကြော်ငြာလုပ်ငန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်မှာကြီးမားတဲ့စျေးကွက်အလားအလာရှိတယ်.